प्रबिधि Archives - Page 11 of 14 - Sabal Post
जिमेलमा थपिए यी नयाँ फिचर्स
एजेन्सी/गुगलले हालै आफ्नो इमेल सर्भिस जिमेलमा कैयन् नयाँ फिचर्स थप गरेको छ । यही हप्ता आफ्नो ब्लग पोष्टमा गुगलले यसको घोषणा गरेको छ ।गुगलले जिमेमा राइट क्लिक मेन्यूमा केही नयाँ उपयोगी फिचरहरु थप गरेको छ । अहिले जिमेलमा राइट क्लिक
२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार विस्तृतमा »
शुक्रबारदेखि बुटवलमा क्यान इन्फोटेक
बुटवल । क्यान महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा आगामि शुक्रबारदेखि बुटवलमा हुने स्टाटप्स वाइटेक क्यान इन्फोटेक २०१९ ईन एशोसिएशन विद प्रभु पे को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फाल्गुन ७ गतेसम्म प्रदर्शनी स्थल बुटवलमा चल्ने मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार विस्तृतमा »
फेसबुकमा नयां फिचर च्याट चैट हुने
सोसल नेटवर्किङ्ग साइट फेसबुकले अन्ततः प्रयोगकर्ताले व्यग्र रुपमा प्रतीक्षा गरिरहेको निकै कामलाग्ने फिचर लञ्च गरेको छ । वास्तवमा फेसबुकले मेसेन्जर प्रयोगकर्ताका लागि अनसेन्ड फिचर ल्याएको हो । अब फेसबुक मेसेन्जर प्रयोगकर्ताले मेसेन्जरमा कसैलाई पठाएका मेसेजहरु डिलिट गर्न सक्नेछन् । यसरी प्रेषकले
नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा पनि रोमिङ सेवा उपलब्ध गराउने
नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा पनि रोमिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि पोष्टपेड मोबाइल सेवामा मात्रै त्यस्तो सेवा दिइँदै आएकोमा आजदेखि प्रिपेड सेवामा समेत उक्त सुविधा दिन लागिएको हो। देश बाहिर तत्कालका लागि भारत र चीनमा प्रिपेड रोमिङ सेवा उपलब्ध
२२ माघ २०७५, मंगलवार विस्तृतमा »
अमेरिका र चीनले विश्वलाई कसरी बाँड्लान् इन्टरनेट ?
काठमाडौं -अबको पाँच वर्षमा दुई किसिमको इन्टरनेटको प्रयोग हुनेछ । एउटालाई चीनले नेतृत्व गर्नेछ भने अर्को अमेरिकाले गर्नेछ । वरिष्ठ पुँजीपतिको विभिन्न आँकलनअनुसार इन्टरनेटको विकास भिन्न किसिमको हुन गइरहेको हो । अहिले अघि सारिएको अवधारणालाई ‘स्पिल्न्टरनेट’ नाम दिइएको छ ।
काठमाडाै‍ - नेपाल टेलिकमले १५ औं वार्षिक उत्सवकाे अवसरमा ग्राहकमुखी विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेको छ। टेलिकम प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बार्षिक उत्सव समारोहमा अफरहरुकाे घोषणा गरेको हुन। टेलिकमले माघ २२ गते देखि फागुन २२ गतेसम्म एनटी मोबाइल एप डाउनलोड तथा रजिष्ट्रेसनमा निशुल्क १ सय एमबी डाटा उपलब्ध
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दाे साइबर अपराध : पैसा लुट्ने र अर्कालाई सिध्याउने माध्यम बन्दै
काठमाडौँ- आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाउँदा साइबर अपराध बढेर गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने, अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेको हो । महानगरीय
२० माघ २०७५, आईतवार विस्तृतमा »
एनसेल कर छलीको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेशी २० गते
काठमाडौं -सर्वोच्च अदालतमाएनसेल कर छली प्रकरणको सुनुवाइ यही माघ २० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको वृहत् पूर्ण इजलासामा बिहीवारबाट शुरू भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखी २० गतेलाई अर्को पेशी तोक्ने निर्णय भएको हो । वृहत् पूर्ण
हुवावे विरुद्ध अमेरिकी अभियोग सार्वजनिक, व्यापार वार्तामा असर पर्ने सम्भावना !
अमेरिका- अमेरिकी प्रशासनले चीनको अग्रणी प्रविधि एवं दूरसञ्चार कम्पनी हुवावे विरुद्ध फौजदारी आरोप सम्बन्धी २० वटा अभियोग लगाएको छ । वासिङ्टनमा बुधबार चीन र अमेरिकाबीच व्यापार वार्ता शुरु हुनुअघि हुवावे विरुद्धको अभियोगले वार्ता नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ ।
१६ माघ २०७५, बुधबार विस्तृतमा »
नेपाली युवा उदयले विकास गरे एलेक्सामा नेपाली अनुवादक
काठमाडौं - एक नेपाली युवा उदय शिवाकोटीले एलेक्सा प्रयोगकर्ताको लागि अङ्ग्रेजीबाट नेपाली अनुवाद गर्नसक्ने आर्टिफिसयल इन्टेलिजे्स एआईको विकास गरेका छन् । एमजनको भर्चुअल एसिस्टेन्ट एलेक्सामा उनले नेपाली अनुवाद गर्नसक्ने प्रविधिको विकास गरेका हुन् । शिवाकोटीले विकास गरेको अनुवादकको सहयोगमा मानिसहरुले